Ọdịiche dị n'etiti ụbọchị ngafe na nke kacha mma tupu ụbọchị | Bezzia
Enwere ọnụọgụgụ na -eju anya. Mmadụ na -atụfu ihe dị ka kilogram 128 kwa afọ maka amaghị ọkwa ndụ ndụ nri, Ị maara ya? Enwere ndị, mgbe ha na -emepe friji wee chọta yogọt kubie ume, ga -atụfu ya ozugbo na -eche na ọ nweghị nchekwa iri ya. Ma, ọ̀ bụ eziokwu?
Amaghị ihe na -emetụta ịdị adị nke nnukwu nri n'efu nke a ga -ezere. A nsogbu ọha, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi nke kwalitere iji ụbọchị oriri masịrị na nnọchi nke ụbọchị mmebi na nri ụfọdụ. Ma gịnị bụ ihe dị iche?
Anyị ji n'aka na ị ma usoro abụọ ahụ, na ị marala na -achọ ha na ngwaahịa nke i ji juju ụgbọ ahịa gị, mana ị doro anya na ọdịiche dị n'etiti usoro abụọ a? Ị ma ihe egwu ma ọ bụ enweghị ihe egwu dị na ịghara ịkwanyere ụbọchị ndị a ùgwù? Na Bezzia anyị na -agba mbọ iwepu obi abụọ gị niile taa.
1 Datebọchị Mmebi
2 Kachasị mma tupu ụbọchị
3 Ọnọdụ nchekwa
Ụbọchị ngafe bụ ụbọchị a na -ewere nri dị ka ihe adịghị mma. Ụbọchị a dabara na nri nke na -emebi emebi microbiologically na, yabụ, nwere ike ibute ahụike mmadụ ozugbo obere oge.
Ngwaahịa niile nwere ihe egwu microbiological ha ga -ebu ụbọchị ngafe. Egosipụtara nke a dị ka "ụbọchị ngafe" na mpaghara onye ọ bụla ejikọtara ma debe ya na ụbọchị n'onwe ya (ụbọchị, ọnwa na afọ), ma ọ bụ site na ntụnye aka na ebe enyere ụbọchị ahụ.
Site na ngafe ụbọchị a ghọtara ya, yabụ, na a ga -ewepụrịrị ma ọ bụ tụfuo nri iji zere nsị nri nwere ike ime. Gịnị ma ọ bụrụ na nri ahụ ama mma? Agbanyeghị na ọ dị ka ọ dị mma, microbiologically ọ nwere ike ibute ahụike, anyị agaghị enwe ike ịchọpụta ya n'ụzọ anụ ahụ.
Kachasị mma tupu ụbọchị
Ụbọchị iri nri kachasị amasị na -egosi ụbọchị ruo mgbe ngwaahịa a ga -ejigide ihe njiri mara ya. Ozugbo ụbọchị a gafere, nri nwere ike hapụ ụfọdụ ihe ndị dị ka anụ ọkụkọ, isi ma ọ bụ udidi, mana ọ ga -adịrị onye na -azụ ya uru ma ọ bụrụhaala na a na -akwanyere ọnọdụ nchekwa.
Akara ahụ "kacha mma tupu njedebe nke ..." ma ọ bụ "kacha mma tupu ..." ya mere na -egosi mgbanwe dị ukwuu karịa "ụbọchị ngafe". Enwere ike iri ngwaahịa ndị gaferela nke kacha mma tupu ụbọchị ahụ? Nkwado nke Agencylọ Ọrụ Na -ahụ Maka Nchedo Nri na Nri nke Spanish na -atụ aro tupu i rie ha na akpa nri emebibeghị wee lelee na nri ahụ dị mma, na -esi ísì ọma, na -atọkwa ụtọ. Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ enwere ike iri ya n'enweghị nsogbu.
A na -ere ngwaahịa ndị ahụ ka ọ kacha mma tupu ụbọchị? Ee e ewepu ya site na ire ere.
Ihe ndị m kwuru n'elu nwere naanị okpomọkụ ma ọ bụrụ na -akwanyere ọnọdụ nchekwa na ojiji nri, yana ụbọchị oke oriri ozugbo emepere akpa ahụ. Ịsọpụrụ ọnọdụ ndị a na -egosi mgbe niile na ngwaahịa dị mkpa iji hụ na nchekwa nke otu nri. Ọ bụrụ na emeghị otu a, na agbanyeghị ụbọchị ngafe ya ma ọ bụ iri nri, nri a na -ekwu nwere ike inwe mmetụta na -adịghị mma na ahụike gị.
Ọ bụghị ngwaahịa niile ka achọrọ ka ha buru ihe ngosi gbasara oriri masịrị ha ma ọ bụ ụbọchị ngafe ha. N'ime ha, anyị na -ahụ ngwaahịa nke emebere oriri ya maka obere oge na obere mbibi pụtara ìhè, dịka ọ dị na mkpụrụ osisi, na ngwaahịa nwere ogologo ndụ ogologo nwere njirimara na -amasị nchekwa nke ha, dịka mmanya. Ihe ọ Alụcoụ na -aba n'anya, ebe a na -eme achịcha na ihe ndị na -atọ ụtọ, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri bụ ụfọdụ n'ime nnukwu nri nri n'ụdị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » Ọdịiche dị n'etiti ụbọchị ngafe na nke kacha mma tupu ụbọchị